IiMyuziyam zeWax eziBalaseleyo eMelika | Ukuhamba kwe-Absolut
maruuzen | | EU.SA
Ingaba uyayithanda iimyuziyam ze-wax? Ziyamangalisa, isiqwenga ngasinye ekubonisweni sisiqwengana sobugcisa, ukwenziwa kwakhona ngokuchanekileyo okunika umbono. Ukuba ucinga ukuba iimyuziyam zikaMadame Tussauds kuphela kwazo, ndiyakuxelela ukuba akunjalo, eUnited States zininzi iimyuziyam ze-wax.
Kwinqaku lethu langoku siza kuthetha ngalo iimyuziyam ezilungileyo ze-wax eMelika, ke bhala ezona zinomdla kutyelelo lwakho olulandelayo.
1 Iimyuziyam ze-wax
2 Iimyuziyam ze-Wax e-United States
3 Indlu kaFrankenstein
4 Imyuziyam yaseJesse James Wax
5 Imyuziyam yaseHollywood Wax
6 IMyuziyam enkulu yeSizwe eMnyama
7 IZiko loLondolozo lweMbumbulu
8 IMyuziyam yaseSalem Wax
9 UMyuziyam waseTussaud
10 Imyuziyam yesizwe ye-wax kaMongameli
Ithini imbali yeedoli zewax? Yonke le nto yaqala ngayo izindlu zokungcwaba ubukhosi baseYurophu, ophetheyo ekwenzeni imveliso yobungakanani be-wax enxibe iimpahla zomntu ofileyo. Kwaye kutheni besenza ezi zinto zivelisayo? Ngokwesiko le inkonzo yomngcwabo oko kuthetha ukuthwala isidumbu sisiwe ebhokisini, kungcelele kwaye ngenxa yoko kuxhomekeke kwimozulu embi.
Ke umbono wokukwenza Umthwebeba womthwebeba, Kuqala intloko nezandla ezazizezona zaziphuma kwiingubo zasebukhosini. Emva kokungcwatywa okanye ukungcwatywa, kwaba lisiko ukushiya ezi ziqwenga ngaphakathi ukubonisa kwecawa, eye yaphela itsala ababukeli abaninzi. Kwaye siyazi, konke oko bekunexabiso.
Emva kwexesha, ukubonwa ebomini kwala manani kuye kwaduma kwaye kwabakho abachweli abaziingcibi abahamba kwiinkundla zaseYurophu beqokelela iikhomishini kunye nemali. Isiko lazalelwa eYurophu phakathi kobukhosi, kodwa inyani kukuba ekuhambeni kwexesha yawela ulwandle kwaye namhlanje kukho iimyuziyam eMelika nasehlabathini, kodwa akusekho mivuzo kodwa abadumileyo.
Iimyuziyam ze-Wax e-United States
I-United States ineemyuziyam ezininzi ze-wax, ezinye ziseCalifornia, ezinye ziseNew York, Las Vegas, Washington kwaye uluhlu luqhubeka njalo. Apha uya kufumana amanani e-wax azo zonke iintlobo, kwezinye mivuzo, uhamba iimvumi ezidumileyo kunye nabalinganiswa abasuka kuncwadi oludumileyo kude kube, ewe, iinkwenkwezi zeHollywood bayo yonke iminyaka.
Le myuziyam ikwiLake George, eNew York, kwaye iyimyuziyam yoyikiso yokuba, nangona isihloko sibhekisa eFrankestein, zikho nezinye imovie eyoyikisayo kunye nabalinganiswa beencwadi Ingakoyikisa. Ingqokelela isekwe kuncwadi oloyikisayo oluqhelekileyo nakwimiba yesiko kwiimyuziyam zolu hlobo, ke kukho iindawo ezithile zobundlobongela ezinokuba namandla.
Abanye abalinganiswa bayakhwaza, abanye bashukuma kancinci kwaye bonke bayoyika, kuba yi- Indlu eneziporho, emveni kwakho konke. Le myuziyam isavulekile kubhubhane kodwa kufanelekile ukujonga iintsuku kunye neeyure kuba yonke into ingatshintsha. Okwangoku ivula ngeempelaveki ukusuka ngo-10 ukuya ku-5 okanye ngo-6 ntambama. Ukwamkelwa yi- $ 10,75 yabantu abadala kunye ne- $ 9 yabantwana kunye nabafundi abaneminyaka eli-81 ukuya kweli-13 ubudala.
Imyuziyam yaseJesse James Wax
UJesee James wayengu Wild zasentshona, edume. Kuthiwa usweleke ngo-1882 kodwa umyuziyam uyaphinda uyibuyisela kwimfezeko. Imyuziyam iqulethe iifoto, ulwazi, izinto zeediliya, ngaphezulu kwe-100 lamawaka, phakathi Izinto zobuqu zikaJames kunye neqela lakhe lemigulukudu, izixhobo zibandakanyiwe.
Ukongeza, iindwendwe ziya kubona imifanekiso yodliwanondlebe nabantu ababemazi uJames, kwaye kukho amanani e-wax avelisa kwakhona indlu yomphangi, amaxesha eMfazwe yamakhaya, ukuphanga kwakhe nokunye okuninzi. Imalunga nokuphila ngamava amaninzi kwaye kubonakala ngathi kufezekiswa kakuhle.
Le myuziyam Kukufuphi kwiiCave zeMeramec kwaye ikwenye yeendlela ezidumileyo ehlabathini, i-Route 66, njengoko idlula eMissouri. Emva koko, utyelelo lwagqitywa ngokuhamba kule miqolomba eyathi yavela emva kwezikhukula ezomeleleyo ngo-1941. Kwaye kuyabonakala ukuba imiqolomba yayiyeyona ndawo ifihlakeleyo yeqela iJesse James.
Imyuziyam ineeyure ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwinyanga, kodwa gcinani engqondweni ukuba phakathi kukaNovemba noMatshi ivaliwe. Ukwamkelwa yi- $ 10 kumntu ngamnye.
Imyuziyam yaseHollywood Wax
Le myuziyam iseMyrtle Beach, eSouth Carolina. Lisebe kwaye kuyonwabisa ngokwaneleyo ukuba ungahamba ithutyana ngaphambi kokuya elwandle kunye nokuzonwabisa kwalo. Maninzi amanani e abadumileyo kunye nezinye iZombi, nosaziwayo emva kwayo yonke loo nto.
Ukwamkelwa ngeendleko zabantu abadala phakathi kwe- $ 27 kunye ne- $ 30, kodwa ungayithenga Yonke iPasenti yokuFikelela Kwaye undwendwele iimyuziyam ezintathu kwenye: iMyuziyam yaseHollywood Wax, uHana's Maze of Mirrors and Outbreak, Dread the Undead.
Imyuziyam ivulekile yonke imihla ukusuka kwi-9 kusasa ukuya kwi-9 ngokuhlwa kwaye kule mihla ukusetyenziswa kwe-chinstrap kunyanzelekile.
IMyuziyam enkulu yeSizwe eMnyama
Le myuziyam ikhoyo kwi-baltimore kwaye imalunga Imbali yabafuduki baseAfrika eUnited States. Ulwazi olunikezwe apha alusoloko lufundiswa ezikolweni kwaye ukongeza kwimfundo kakhulu luyonwabisa kakhulu, njengoko iimyuziyam ze-wax zihlala zikhona.
Kukho okuninzi Ngama-150 amanani obungakanani be-wax namagumbi okubonisa aliqela anemixholo eyahlukeneyo. Enye ibizwa ngokuba Umgaqo kaloliwe ongaphantsi komhlaba, kunye namanani kaHaretet Tbman noThomas Garret, elinye icandelo libizwa U shishino kwaye kukho uMadam CJ Waler, omnye ubiziwe Amalungelo abasetyhini kunye nokupheliswa kwaye inamanani eRosa Parks okanye uShirley Chisholm, umzekelo. La ngamagama abantu abamnyama abenze uphawu eMelika.
Imyuziyam idume nge- ubungakanani bobomi bomfanekiso wenqanawa yorhwebo yamakhoboka kwaye kunzima ukubona iimeko apho ukugcwala kwabantu bekwenziwa khona. Ukwamkelwa ngumntu ngamnye kubiza i-15 yeedola kwaye imyuziyam ivuliwe ngoMvulo, ngoLwesithathu nangoMgqibelo ukusuka nge-10 ukuya kweye-5 ngokuhlwa nangeeCawa ukusuka emini ukuya kuthi ga kwi-5 ngokuhlwa. Kukho ukhenketho olukhokelwayo.
IZiko loLondolozo lweMbumbulu
Le myuziyam isebenza kwikhemesti endala kweli lizwe, eyinika umtsalane ngakumbi. Yintoni egqithisile, Yeyona ndawo indala yokulondolozwa kwe-wax eMelika kwaye kukho iindidi ezininzi zamanani ukusuka kumakhulu-khulu aseRoma ukuya kwinkulungwane ezingama-XNUMX zabantu abadumileyo.
Umsunguli wemyuziyam, uGeorge Potter, waba nomdla koonodoli nge-wax kutyelelo lwaseLondon kwaye wafuna ukwenza into efanayo e-United States, kodwa ngamanani ezopolitiko kuzwelonke. Ke wathenga i-wax efanelekileyo eFrance, ezona zinwele zibalaseleyo e-Italiya kwaye wahlawula iingcibi ezibalaseleyo emhlabeni. Ukuveliswa kwenzeka eBelgium emva koko yonke into yafuduselwa kumyuziyam ngo-1949.
Imyuziyam ngaphakathi kwiSithili seMbali yeSizwe, ISan Agustin, eyona ndawo indala yaseYurophu kweli lizwe, indawo entle kakhulu. Kuku-31 iOrange St. kwaye kuvulwa ngoMvulo ukuya ngeCawa ukusukela nge-9 kusasa ukuya kwi-5 ngokuhlwa. Ukwamkelwa kujikeleze i- $ 11.
IMyuziyam yaseSalem Wax
Le myuziyam ikwi ISalem, eMassachusetts. ubhiyozela unyaka wama-25 kulo nyaka kwaye kunye ninokutyelela iindawo ezinomtsalane zeSalem Witch Village kunye neTrails Memorial kunye neCharter Street Burying Point, konke okunxulumene Ukuzingelwa kwamagqwirha.
Indawo igqibelele kuba ukongeza kwimyuziyam onako thatha ubusuku uhamba ngezitrato kunye nezindlu ezixineneyo. Ukhenketho luxoxa ngembali yezakhiwo, imisebenzi yoomoya, kunye nezityholo zobugqwirha ezathi zawela kwabasetyhini ngelo xesha. Kwakhona kukho ukhenketho losuku.
Ewe, ngalo mzuzu umyuziyam uvaliwe ngenxa yobhubhane kodwa kungekudala ukuvulwa kwentengiso ye-Intanethi yamatikiti ka-Okthobha, efumaneka ngoJulayi, iyakubhengezwa. Nkqu amatikiti athengwe ngo-2020 aya kusebenza.
E-Salem ungandwendwela Imyuziyam yePirate Kwaye eBristol, Connecticut, UMyuziyam woBumdaka beMovie yesiDunge, Indawo ekuyiwa kuyo ukuba uthanda iimovie ezoyikisayo, ezinamanani akudala IDracula, iFrankenstein, iNosferatu kunye nePhantom yeOpera, umzekelo.
Le myuziyam yiyo eHollywood, eCalifornia, kwaye ngalo mzuzu ivaliwe. Ingqokelela yayo yahlulwe yangamacandelo aliqela: IHollywood Spirit, iiPop kunye neeMpawu zeNtshona. Kukho indawo ebonakalayo, indawo enikezelwe kwii-90s, enye yeefilimu Marvel 4D kunye nomnye onikezelwe kuJimmy Kimmel.
Ukwamkelwa yi- $ 20 kwaye kukho IHollywood Walk of Fame enabantu abadumileyo abali-115 ukufota. Iimyuziyam zikaMadame Tussauds ngokungathandabuzekiyo zezona zaziwayo ukuze ukwazi ukutyelela ezinye zeendawo iiofisi zamasebe Ewe, kukho eNew York, eLondon nakwezinye izixeko zaseYurophu nakwi-Asiya.
Imyuziyam yesizwe ye-wax kaMongameli
Imyuziyam yoqobo yile eMzantsi Dakota kwaye iqulethe malunga nekhulu lamanani e-wax kumongameli ngamnye we-45 wase-United States. Imyuziyam yile imizuzu nje emihlanu ukusuka kwiNtaba iRushmore, intaba edumileyo enobuso babongameli abane, kwisixeko saseKeystone.
Kukho isikhokelo esimanyelwayo esibalisa imeko yezembali eveliswe ngamanani, kunye nevidiyo yemizuzu esixhenxe ebonisa ukuba amagcisa ayenze njani imifanekiso ye-wax. Kukho iimaski zokufa zoomongameli, iinkwenkwezi ezilikhulu kunye namanye amanani embali. Imyuziyam ivuliwe namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iimyuziyam ezilungileyo ze-wax eMelika